musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Wepasi wekutanga COVID-19 DNA jekiseni rakagamuchirwa muIndia
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • India Kupwanya Nhau • nhau • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mushonga, ZyCoV-D, unoshandisa chikamu chemajini kubva kuhutachiona icho chinopa rairo seDNA kana RNA kugadzira puroteni yakatarwa neinozivikanwa neyekudzivirira muviri.
India inobvumira mushonga mutsva wecoronavirus.
Kubvumidzwa kwakapihwa kushandiswa muvakuru uye vana gumi nemaviri uye vakuru.
India ine chinangwa chekudzivirira vese vakuru vanokodzera muna Zvita, 2021.
DNA yekutanga yepasi rose inopesana nehutachiona hweCOVID-19 yakapihwa mvumo yekushandisa nechimbichimbi neCentral Drugs Standard Control Organisation yeHurumende yeIndia (CDSCO), sezvo nyika ichiri kutambura kuti hutachiona hwupararire mune dzimwe nyika.
The CDSCO mvumo yakapihwa yekushandisa nechimbichimbi muvakuru nevana vane makore gumi nemaviri zvichikwira.
Kubvumidzwa kunopa yekutanga kupfura kune avo vari pazasi pemakore gumi nemasere, uye kupa kukurudzira kune Indiachirongwa chekudzivirira, icho chiri nechinangwa chekudzivirira vese vakuru vanokodzera veIndia panosvika Zvita, 2021.
Kusiyana nemishonga yekudzivirira coronavirus, inoda madosi maviri kana kunyange imwe chete dosi, ZyCoV-D inopihwa muzvikamu zvitatu.
Mugadziri wezvinodhaka, akaverengerwa seCadila Healthcare Ltd, anotarisira kugadzira mamirioni zana kusvika pamakumi maviri emamiriyoni ezviyero zveZyCoV-D pagore uye atotanga kuchengeta mushonga.
Mushonga weZydus Cadila, wakagadzirwa mukubatana pamwe neDhipatimendi reBiotechnology, ndiyo yechipiri-yakura kupfura pamba kuwana mvumo yekukurumidzira muIndia mushure meBharat Biotech's Covaxin.
Mugadziri wezvinodhaka akati muna Chikunguru mushonga wekudzivirira weCOVID-19 waive wakashanda kurwisa mutserendende mutsva wecoronavirus, kunyanya musiyano weDelta, uye kuti pfuti yacho inoitiswa uchishandisa musina-tsono usingashandisi maringe nemajekiseni echinyakare.
Iyo femu yakanga yakumbira kupihwa mvumo kweZyCoV-D musi waChikunguru 1, zvichibva pahunhu hunobudirira hwe66.6 muzana muyedzo yekupedzisira-danho revanopfuura 28,000 vanozvipira nyika yese.